တစ်ပတ်အတွင်း အမေးအများဆုံးမေးခွန်းများ အပတ်စဉ် ၉ -
How To, Techchnology
တစ်ပတ်အတွင်း အမေးအများဆုံးမေးခွန်းများ အပတ်စဉ် ၉
ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းမှာ မလိုအပ်တဲ့ App တွေကိုUninstall လုပ်ပေးပါ။ App တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးသွားရင် Recent ကို ပုံမှန်ရှင်းလင်းပေးပါ။ ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ကိုက်ညီမယ့် App version တွေကိုသာရွေးချယ်အသုံးပြုပါ။ Version အမြင့်တွေ Update ပေးတိုင်းလိုက်မလုပ်သင့်ပါ။ ဖုန်းရဲ့ RAM ပမာဏကို အနည်းဆုံး ၃ချိုး၂ချိုးလောက်လွတ်နေအောင်လုပ်ပြီးမှ သုံးချင်တဲ့ App ကိုဖွင့်ပါ။ တစ်နေ့တစ်ခါလောက်ဖုန်းကို Restart(Reset မဟုတ်) ချပေးတာဖြစ်ဖြစ် Power5မိနစ်လောက် ပိတ်ထားပေးတာဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးပါ။
ဖုန်းမှာသီချင်းတွေကို Ringtone လုပ်ချင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
PlayStore မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Google ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် Ring tone maker လို့ရိုက်ရှာကြည့်ပါ။ အများကြိးရှိတာတွေ့ရပါမယ်။ ဒီထဲကမှ User rate အများဆုံးဖြစ်တဲ့ App ကိုဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပြီးအလွယ်တစ်ကူအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ပြန်ကြည့်နိုင်မယ့် App
နေ့စဉ် အပတ်စဉ် လစဉ် ငွေအသုံးစရိတ်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ပြီးအလွယ်တစ်ကူ ပြန်ကြည့်ရှုလို့ရမယ့် App တွေကတော့ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲ့အထဲကမှ အားလုံးအတွက်အသုံးလွယ်ပြီး အဆင်ပြေမယ့် App ကိုညွှန်းပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ Money Lover App ကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုပါလို့ညွှန်းပေးပါရစေ။ အဆိုပါ App ဟာ Google အကောင့်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားနိုင်တဲ့အတွက် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Data တွေပျောက်ဆုံးပျက်စီးမယ်ဆိုရင်တောင် အကောင့်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအလွယ်တစ်ကူ ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် Android , iOS , Window OS အားလုံးမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရနိုင်တာကြောင့် အတော်လေးအဆင်ပြေစေတဲ့ App တစ်ခုပါပဲ။
Note Application ကောင်းကောင်းလေး
Note App တွေလည်း အများကြီးတော့ရှိပါရဲ့ ဒါပေမယ့် စိတ်ကြိုက်သိပ်မဖြစ်လှတာများပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ ဖုန်းတစ်လုံးကနေတစ်လုံးပြောင်းရင် ဖုန်းအဟောင်းက မှတ်စုတွေက ဖုန်းအသစ်ကို အလွယ်တစ်ကူ Restore လုပ်လို့မရတာများပါတယ်။ ဒီပြဿနာကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးနိုင်တာကတော့ Google Keep နဲ့ Color note app တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ App နှစ်ခုကလည်း Google အကောင့်တစ်ခုတည်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြိး ကိုယ့်ရဲ့ Data တွေအားလုံးကို Backup & Restore ပြုလုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းမှာ YouTube က သီချင်း MV တွေကို Mp3 Format နဲ့ဘယ်လို Download လုပ်မလဲ ?
ဒီအတွက်နည်းလမ်း၂နည်းရှိပါတယ်။ ပထမနည်းလမ်းကတော့ Video ကိုအရင် Download ဆွဲပြီးမှ Video to Mp3 Converter application တစ်ခုခုနဲ့ပြန်ပြောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယနည်းလမ်းကတော့ VidMate Application ကနေတစ်ဆင့် ကိုယ်Download လုပ်မယ့် Video ကို MP3 Format တစ်ခါတည်းရွေးပေးပြီး Download ပြုလုပ်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Phone Hay Ko ( Akhayar )
တဈပတျအတှငျး အမေးအမြားဆုံးမေးခှနျးမြား အပတျစဉျ ၉
ကိုအသုံးပွုနတေဲ့ဖုနျးမှာ မလိုအပျတဲ့ App တှကေိုUninstall လုပျပေးပါ။ App တဈခုကိုအသုံးပွုပွီးသှားရငျ Recent ကို ပုံမှနျရှငျးလငျးပေးပါ။ ကိုယျ့ဖုနျးနဲ့ကိုကျညီမယျ့ App version တှကေိုသာရှေးခယျြအသုံးပွုပါ။ Version အမွငျ့တှေ Update ပေးတိုငျးလိုကျမလုပျသငျ့ပါ။ ဖုနျးရဲ့ RAM ပမာဏကို အနညျးဆုံး ၃ခြိုး၂ခြိုးလောကျလှတျနအေောငျလုပျပွီးမှ သုံးခငျြတဲ့ App ကိုဖှငျ့ပါ။ တဈနတေ့ဈခါလောကျဖုနျးကို Restart(Reset မဟုတျ) ခပြေးတာဖွဈဖွဈ Power5မိနဈလောကျ ပိတျထားပေးတာဖွဈဖွဈ လုပျပေးပါ။
ဖုနျးမှာသီခငျြးတှကေို Ringtone လုပျခငျြလို့ဘယျလိုလုပျရမလဲ
PlayStore မှာပဲဖွဈဖွဈ Google ကနပေဲဖွဈဖွဈ Ring tone maker လို့ရိုကျရှာကွညျ့ပါ။ အမြားကွိးရှိတာတှရေ့ပါမယျ။ ဒီထဲကမှ User rate အမြားဆုံးဖွဈတဲ့ App ကိုဒေါငျးလုပျပွုလုပျပွီးအလှယျတဈကူအသုံးပွုနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
နစေ့ဉျအသုံးစရိတျတှကေို မှတျတမျးတငျပွနျကွညျ့နိုငျမယျ့ App
နစေ့ဉျ အပတျစဉျ လစဉျ ငှအေသုံးစရိတျတှကေို မှတျတမျးတငျပွီးအလှယျတဈကူ ပွနျကွညျ့ရှုလို့ရမယျ့ App တှကေတော့ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ အဲ့အထဲကမှ အားလုံးအတှကျအသုံးလှယျပွီး အဆငျပွမေယျ့ App ကိုညှနျးပေးရမယျဆိုရငျတော့ Money Lover App ကိုစမျးသပျအသုံးပွုပါလို့ညှနျးပေးပါရစေ။ အဆိုပါ App ဟာ Google အကောငျ့နဲ့ခြိတျဆကျထားနိုငျတဲ့အတှကျ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ Data တှပြေောကျဆုံးပကျြစီးမယျဆိုရငျတောငျ အကောငျ့နဲ့ခြိတျဆကျပွီးအလှယျတဈကူ ပွနျလညျရယူနိုငျပါသေးတယျ။ ဒါ့အပွငျ Android , iOS , Window OS အားလုံးမှာလညျးအသုံးပွုလို့ရနိုငျတာကွောငျ့ အတျောလေးအဆငျပွစေတေဲ့ App တဈခုပါပဲ။
Note Application ကောငျးကောငျးလေး
Note App တှလေညျး အမြားကွီးတော့ရှိပါရဲ့ ဒါပမေယျ့ စိတျကွိုကျသိပျမဖွဈလှတာမြားပါတယျ။ အကွောငျးအရငျးကတော့ ဖုနျးတဈလုံးကနတေဈလုံးပွောငျးရငျ ဖုနျးအဟောငျးက မှတျစုတှကေ ဖုနျးအသဈကို အလှယျတဈကူ Restore လုပျလို့မရတာမြားပါတယျ။ ဒီပွဿနာကိုအကောငျးဆုံးဖွရှေငျးပေးနိုငျတာကတော့ Google Keep နဲ့ Color note app တှပေဲဖွဈပါတယျ။
ဒီ App နှဈခုကလညျး Google အကောငျ့တဈခုတညျးနဲ့ ခြိတျဆကျပွိး ကိုယျ့ရဲ့ Data တှအေားလုံးကို Backup & Restore ပွုလုပျပေးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ဖုနျးမှာ YouTube က သီခငျြး MV တှကေို Mp3 Format နဲ့ဘယျလို Download လုပျမလဲ ?
ဒီအတှကျနညျးလမျး၂နညျးရှိပါတယျ။ ပထမနညျးလမျးကတော့ Video ကိုအရငျ Download ဆှဲပွီးမှ Video to Mp3 Converter application တဈခုခုနဲ့ပွနျပွောငျးတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒုတိယနညျးလမျးကတော့ VidMate Application ကနတေဈဆငျ့ ကိုယျDownload လုပျမယျ့ Video ကို MP3 Format တဈခါတညျးရှေးပေးပွီး Download ပွုလုပျတဲ့နညျးပဲဖွဈပါတယျ။
[ Zawgyi ] တစ်ပတ်အတွင်း အမေးအများဆုံးမေးခွန်းများ 1.MIUI9ကို Update ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ? November လအတွင်းမှာ XIAOMI Devices…
[ Zawgyi ] အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့တစ်ပတ်အတွင်း အမေးများတဲ့မေးခွန်းများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ #1 ၁ သိန်းကနေ ၂ သိန်းဝန်းကျင် ထဲမှာ ဂိမ်းအပါအဝင် ဘက်စုံ သုံးလို့ အဆင်ပြေမယ့်…
တစ်ပတ်အတွင်းအမေးအများဆုံးမေးခွန်းများ အပတ်စဉ် ၈
#1MPT ၊ Telenor ၊ Ooredoo ဖုန်းလိုင်းတွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို တစ်နေရာတည်းမှာအပြည့်အစုံရယူနိုင်မယ့် Application MPT ၊ Telenor ၊ Ooredoo ဖုန်းလိုင်းတွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို တစ်နေရာတည်းမှာအပြည့်အစုံရယူနိုင်မယ့်…
တစ်ပတ်အတွင်း အမေးအများဆုံး မေးခွန်းများ
[ Zawgyi ] တစ်ပတ်အတွင်း အမေးအများဆုံး မေးခွန်းများ မြန်မာပြည်အတွင်း Internet မလိုပဲအသုံးပြုလို့ရတဲ့ Offline Map လေးရှိမလား ? ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ Google…
[ Zawgyi ] တစ်ပတ်အတွင်းအမေးအများဆုံးမေးခွန်း၅ခု #1 ဖုန်းထဲမှာပျက်သွားတဲ့ ပုံတွေကိုဘယ်လိုပြန်ရှာရမလဲ ? မတော်တဆပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေ ပျက်သွားခဲ့ရင် ဒီ Application ကိုအသုံးပြုပြီးပြန်ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။…
[ Zawgyi ] တစ်ပတ်အတွင်းအမေးအများဆုံးမေးခွန်းများ #1Facebook မှာပုံတွေတင်ရင် ရုပ်ထွက်ကျပြီးဝါးမသွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ? Facebook application Setting ထဲကိုသွားပါ။ အဲ့ကနေ App…
Google ရဲ့ အသုံးဝင် Camera App များ
[ Zawgyi ] Google ရဲ့ အသုံးဝင် Camera App များ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အသုံးဝင် Apps တွေအမြဲထုတ်ပေးလျှက်ရှိတဲ့ Google ကနေ…
Download ပြုလုပ်သူ သန်း၅၀ ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ Prisma App
[ Zawgyi ] Download ပြုလုပ်သူ သန်း၅၀ ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ Prisma App Prisma ဆိုတာကတော့ ကွန်ပျူဥာဏ်ရည်တု နဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ Application…
စကီလေးကို တစ်ပတ်အတွင်း အပိုးကျိုးအောင်လုပ်မယ်
အဟင်းဟင်း၊ ယောက်ျားဆိုတာက မိန်းကလေးကို ရည်းစားဘဝကတည်းက အချိုးပြေနေအောင် လုပ်ထားဖို့လိုတယ်။ သိတယ်မလား အပိုးကျိုးအောင်ပေါ့။ အားနွဲ့တဲ့မိန်းမသားဆိုပြီး မညှာလေနဲ့။ အတင်စီးခံလိုက်ရင် ခေါင်းပေါ်တက်လာလိမ့်မယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ ဟိတ်ဆို…
Google က အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Wallpaper App
Google က အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Wallpaper App Google ဟာ သူ့ရဲ့ Pixel ဖုန်းတွေအတွက် သီးသန့်ပါဝင်တဲ့ Wallpaper App ကို Android…
၂၀၁၇ အတွက်ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး Plus-Size Model များ
လူတိုင်းမှာ အလှကိုယ်စီရှိကြပါတယ်နော။ ပိန်မှလှတယ် ဝမှလှတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဝဝဖြိုးဖြိုးအလှပဂေးလေးတွေဟာလည်း သူ့ကောက်ကြောင်းနဲ့သူ အားကျဖွယ်ရာ လှကြပါတယ်။ ဒီတော့ ဝတုတ်ကြီး ၊ ဝတုတ်မ ၊ ဝက်မ စသဖြင့် Body Shaming အလုပ်ခံရလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလျော့နည်းစရာ မလိုပါဘူးနော်။ ဝတုတ်လေးတွေမှာလည်း လူအများအားကျရလောက်တဲ့ အလှအပတွေ ၊ စတိုင်လ်ကျမှုတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါတွေကို သက်သေပြဖို့ ဒီနှစ်အတွက် ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး Plus-Size Model တွေအကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ၁၀) Jakaliene Rivera သူမက အသက် ၂၆ နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။ ပေါင်ချိန်ကတော့ ၁၇၅ ပေါင်ရှိပါတယ်။ လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ သူမကဘေးလူတွေဘာပြောပြောသူမရဲ့ အသွင်အပြင်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ထုတ်ဖော်တဲ့သူပါ။ အညိုရောင်ဆံပင်ရှည်တွေ ၊ […]
လူမှုကွန်ရက်သုံးစွဲမှုကို စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းဖို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ အဆိုတင်
[Zawgyi] လူမှုကွန်ရက်သုံးစွဲမှုကို စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းဖို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ အဆိုတင် လူငယ်လူရွယ်များ အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြားစေခြင်း၊ ရပ်ရွာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ပျက်ပြားစေခြင်းတို့ကြောင့် ဆိုရှယ်လူမှုကွန်ယက်သုံးစွဲမှုကို စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းနိုင်ရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ယဉ်မင်းလှိုင်က လွှတ်တော်မှာ အဆိုတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာ ဂန့်ဂေါ မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ယဉ်မင်းလှိုင်က “ လူငယ်လူရွယ်များ အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြားစေခြင်း၊ ရပ်ရွာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ပျက်ပြားစေခြင်းတို့ကြောင့် IT နည်းပညာသုံးစွဲမှုကို လိုအပ်သလို စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းနိုင်ရန် (Monitoring) ပြုလုပ်နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း” အဆိုကို တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် လက်ခံဆွေးနွေးရန် ကန့်ကွက်သူရှိမရှိကို ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို […]
ဒီနေ့သိသင့်တဲ့ Tech သတင်း ၅ ခု (၁၉.၉.၂၀၁၇)
[Zawgyi] (၁) Apple Watch Series3ကို မှာယူသူ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းက Cellular Version ကို မှာယူကြ Apple နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်သုံးသပ်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Ming Chi Kuo က Apple ရဲ့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Apple Watch Series3ရဲ့ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကို Cellular Version ပဲ မှာယူကြလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ပြီး အခုနောက်ဆုံး KGI Securities ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ Apple Watch Series3ရဲ့ LTE Cellular Version ဟာ […]
ခုခေတ်မှာကလေးတွေဟာ အိမ်ထဲမှာပဲနေတီဗီကြည့် ဖုန်းကြည့်နဲ့ Screen ကြည့်ချိန်များလာသလို အိမ်ပြင်ထွက်ဆော့ရတာနည်းလာတာမို့ မျက်စိအားမကောင်း ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မျက်မှန်တပ်ရတဲ့ အနေအထားတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက မှန်ကြောင်လေးတွေမဖြစ်ရအောင် ဘယ်လိုမျိုးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးရမလဲဆိုတာ ကြည့်ကြပါစို့။ မကြာခဏအနားပေးပါ ကလေးအိမ်စာလုပ်နေတဲ့အချိန် ၊ ဖုန်း တွေ ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ ဆော့နေတဲ့အချိန်မှာ မကြာခဏအနားပေးခိုင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နာရီဝက် နဲ့ မိနစ် ၄၀ ကြာချိန်တိုင်းမှာ တစ်ခါအနားပေးပါ။ သူတို့မျက်လုံးတွေခြောက်သွေ့ယားယံတဲ့အချိန် ၊ ခေါင်းကိုက်လာတဲ့အချိန်တွေမှာ အိမ်ပြင်ကိုကြည့်ခိုင်းပါ။ ဒါမှမဟုတ် မျက်လုံးကို ငါးမိနစ် ၊ ၁၀ မိနစ်ခန့် မှိတ်ခိုင်းထားပြီး ကြွက်သားတွေပြေလျော့စေဖို့လိုပါတယ်။ အလင်းရောင်လုံလောက်ပါစေ စာဖတ် စာရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကလေးကို အလင်းရောင်လုံလုံလောက်လောက်ရစေဖို့ ဖန်တီးပေးရပါမယ်။ Anti-Glare မီးအိမ်တွေကတော့ အကောင်းဆုံးပါ။ သူထိတွေ့နေတဲ့အရာဝတ္ထုပေါ်ကို တိုက်ရိုက်အလင်းရောင်ကျအောင် […]
အခုခေတ်မှာ သွေးတိုး ဆီးချိုသမားတွေ ပိုများလာပါပြီ။ သွေးတိုးဟာ ခေါက်ခနဲလဲကျသေဆုံးနိုင်တဲ့အထိ အန္တရာယ်များသလို သတိလေးထားပြီး နေထိုင်ရတဲ့ရောဂါပါ။ ခုနောက်ပိုင်းမှာ လူကြီးတွေမှာသာမက လူငယ်တွေမှာပါ သွေးတိုးသမားတွေများလာတဲ့အတွက် သွေးတိုးရှိသူတွေနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးသော အစားအစာတွေကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီး သွေးတိုးသမားတွေဟာ အဓိကလုပ်သင့်တာက ဆိုဒီယမ်ဖြတ်ပြီး ပိုတက်ဆီယမ်ဖြည့်တင်းဖို့ပါ။ ဒါကြောင့် သွေးတိုးနေချိန်မှာ ငှက်ပျောသီးစားပေးသင့်ပါတယ်။ သွေးမတိုးချိန်မှာလည်း စားပေးနိုင်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးမှာပါတဲ့ ဓာတ်သတ္တုက ဆိုဒီယမ်မြင့်မားမှုကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးစားပြီး ပိုတက်ဆီယမ်ကိုဖြည့်စွမ်းလိုက်တဲ့အတွက် သွေးတိုးနေခြင်းကို သက်သာစေတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုထားပါတယ်။ ငါး တစ်ပတ်မှာ နှစ်ကြိမ် ငါးစားပေးရုံနဲ့ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ငါးမှာပါဝင်တဲ့ အိုမီဂါ – ၃ […]
Beauty Knowledge Lifestyle mpt
Remover မသုံးဘဲ လက်သည်းနီတွေကို ဖျက်နိုင်မယ့် အိမ်တွင်းပစ္စည်းလေးတွေ
[Zawgyi] Remover မသုံးဘဲ လက်သည်းနီတွေကို ဖျက်နိုင်မယ့် အိမ်တွင်းပစ္စည်းလေးတွေ မိန်းကလေးတွေဟာ လက်တွေကိုအလှဆင်ဖို့အတွက် လက်သည်းနီတွေကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ လက်သည်းနီတွေဟာ မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း တစ်ခုလိုတောင် ဖြစ်နေပါပြီ။ လက်သည်းနီတွေဆိုးပြီး ပြန်ဖျက်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ လက်သည်းဖျက်ဆေး Remover နဲ့ ပြန်ဖျက်ကြရပါတယ်။ လက်သည်းဖျက်ဆေးမသုံးဘဲနဲ့ လက်သည်းနီတွေကို ဓားနဲ့ခြစ်ထုတ်ရင်လည်း လက်သည်းပိုမိုပျက်စီးရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အနီးအနားမှာ Remover ကို အလွယ်တကူရှာမရဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာ အမြဲအသုံးပြုနေကျ တခြားအိမ်သုံးပစ္စည်းလေးတွေကိုသုံးပြီး အလွယ်တကူ ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအသုံးဝင်လှတဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ သွားတိုက်ဆေး သွားတိုက်ဆေးအနည်းငယ်ကို လက်သည်းခွံလေးတွေပေါ်တင်ပြီး သွားပွတ်တံအဟောင်းတစ်ချောင်းကိုသုံးပြီး ပွတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ လက်သည်းနီတွေ တဖြည်းဖြည်း ပျက်သွားမှာပါ။ သွားတိုက်ဆေးမှာ Ethyl […]
တေးပြုစာဆို နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်ကြီးရဲ့ “ရွှေဘိုသနပ်ခါးတုံးများ ရန်ကုန်လိမ်းဖို့ယူ… ဘယ်လို အသားမည်းမည်း… ဝါဝါညက်ညက်ဖြူ” သီချင်းမှအစ “ပါးပြင်မှာ သနပ်ခါးလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာကွာ… ရင်အေးစေတဲ့ဒီအပြုံးလေးနဲ့ အရိပ်ဖွဲ့လာ အိပ်မက်မှာ…” ဆိုတဲ့ သနပ်ခါးသီချင်းအဆုံး မြန်မာ့သနပ်ခါးအပေါ် ဂုဏ်ပြုတဲ့ သီချင်းလေးတွေကြားပြန်တော့ ခေတ်ရဲ့သမီးပျိုလေးတွေလည်း သနပ်ခါးနဲ့လှတဲ့အလှကို ဂုဏ်ယူနေမိပြန်ရော။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ သိန်းကျော်တန်အလှကုန်တွေ ဘယ်လိုပေါ်နေ ခေတ်စားနေလည်းပဲ သနပ်ခါးရဲ့ အရည်အချင်းကိုလည်း ပစ်ပယ်လို့မရပြန်ပါဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲခေတ်မီတဲ့အလှကုန်တွေ သုံးနေသူဆိုပေမယ့် မျက်နှာမှာ နေလောင်တာ ဝက်ခြံထွက်တာ အဖုအပိမ့်ထွက်တာ စသဖြင့် အဆင်မပြေတာများဖြစ်လာရင် သနပ်ခါးသွေးပြီး လိမ်းထားကြရတော့တာပါပဲ။ ဒီလို နေလောင်ဒဏ်ခံရတာ မိတ်ထွက်တာမျိုး ပြဿနာတွေကိုကြုံရတဲ့ ဒီလို နွေရာသီမှာ သနပ်ခါးက ပိုလို့တောင်လိုအပ်လာပါသေးတယ်။ ဒီတော့ မြန်မာတွေပီပီ မြန်မာ့သနပ်ခါးအကြောင်း […]
Wikipedia က Daily Mail ကနေ ကိုးကားဖော်ပြမှုကို ‘မယုံကြည်ရသောရင်းမြစ်’ လို့ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး တားမြစ်
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဘင်္ဂါလီကလေးငယ်တွေကို နှိပ်စက်နေတယ်လို့ သတင်းမှားဖြန့်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဗြိတိန်နာမည်ကျော်သတင်းစာ Daily Mail ကို ရင်းမြစ်အနေနဲ့ ကိုးကားဖော်ပြမှုတွေအပေါ် “အထွေထွေမယုံကြည်နိုင်မှု” လို့ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး တားမြစ်ဖို့အတွက် အွန်လိုင်းစွယ်စုံကြမ်းကြီး Wikipedia ရဲ့ အယ်ဒီတာတွေက ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒေးလီးမေးလ်ဟာ ယူကေမှာ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံးသတင်းစာဖြစ်ပြီး၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဟာ ဆိုရင်လည်း ကမ္ဘာပေါ်က အင်္ဂလိပ်သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွေထဲမှာ လူဖတ်အများဆုံး ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ချက်ဟာ အွန်လိုင်းပေါ်ကအသုံးအများဆုံး စွယ်စုံကျမ်းရဲ့ အရွေ့ကြီးတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Wiki မှာ ကိုးကားဖော်ပြနေတဲ့ သတင်းအများစုဟာလည်း Daily Mail နဲ့ မလွတ်ကင်းလို့ပါ။ အယ်ဒီတာတွေက ဒီလိုတားမြစ်မှုအပေါ် အကြောင်းပြချက်ပေးဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ကြပါတယ်။ Wikimedia Foundation ဟာ Wikipedia […]
Instagram မှာ Post တစ်ခုတင်ပေးဖို့အတွက် Kendall Jenner ကို ဒေါ်လာ ၂သိန်းခွဲပေးခဲ့ရ
Ja Rule ရဲ့ Luxury music faestival ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Fyre Fest” ပွဲကတော့ အစကောင်းပေမယ့် အနှောင်းမသေချာခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီပွဲဟာ Festival Ground အတွင်းမှာ Toilet နဲ့ Tent တွေမလုံလောက်ခဲ့တာလို ပြသနာအကြောင်းတွေကြောင့် မစခင်မှာပဲ ဖျက်သိမ်းသွားခဲ့လို့ပါ။ ဒီအထဲမှာ ဒီပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Instagram မှာ နာမည်ကြီးတဲ့ မော်ဒယ်တွေ၊ Celebrities တွေနဲ့လည်း ကြော်ငြာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Social Media မှာ ကြော်ငြာတဲ့ အလုပ်ဟာ လူမှုကွန်ယက်မှာပဲ ရှိနေတဲ့ လူငယ်တွေထံ ထိထိရောက်ရောက်လည်း ရှိတာကြောင့် ပိုက်ဆံတွေ အများအပြားသုံးစွဲလာကြပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်း Vice က […]